Magacyada madax Shabaab looga dilay weerarka Baraawe oo la helay |
Magacyada madax Shabaab looga dilay weerarka Baraawe oo la helay
Baraawe Sida lagu qoray wargeyska The Telegraph Ciidamada qaaska ee Mareykanka gaar ahaan cutubkii dilay Osama Bin Laden ayaa weerar ka geystay Habeenimadii sabtida degmada Baraawe waxay ku dileen saraakiil sar sare oo Alshabaab ka tirsan.
Labo ka tirsan dagaalyahanada madaxda ajaaniibta ah ee Al-Shabaab, ayaa la sheegay in weerarkaasi lagu dilay, waxaana lagu kala sheegay in muwaadin Somali ah laakiin heysta dhalashada Sweden iyo muwaadin Sudani ah la dilay , iyadoo Sudanese kale lagu dhaawacay weerarka.
Muwaadinka Sudan u dhashay ee lagu dilay weerarka ayaa la sheegay in loo yaqaanay Awab Al Cuqba ama Sheikh Cabdiraxmaan, kaasi oo lasheegay in tababar uu siinayay ciidamada Amniyatka Alshabaab.
Kooxda uu tababarka siinayay ee ka amar qaada Sheikh Muqtaar Abuu Zubeyr ayaa la aamisan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay dalka Kenya gaar ahaan dhismaha ganacsiga ee Westgate.
Wargeyska The Telegraph oo soo xiganaya ilo ku sugan Somalia ayaa sidoo kale sheegay in ruuxa kale ee lagu dilay weerarka loo yaqaan Cabdi Qadar, waxaana labadaba ay ku dhinteen rasaastii ugu horeysay ee dhaceysa 15 ka daqiiqo ee ugu horeeyay ee weerarka.
Sheikh Cabdi Caziiz Abuu Muscab oo la hadlay wakaalada Reuters ayaa beeniyay wararka ku aadan in saraakiil ay ku jireen dhismaha guriga weerarka uu ka dhacay ee degmada Baraawe.